सुन्दर मौका पाउँदा पनि चुके मेस्सी, बार्सिलोना रोकियो ! – " सुलभ खबर "
सुन्दर मौका पाउँदा पनि चुके मेस्सी, बार्सिलोना रोकियो !
एजेन्सी – कप्तान लियोनेल मेस्सीले केही सुन्दर मौका खेर फाल्दा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना युइएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा चेक रिपब्लिक क्लब स्लाभिया प्राहासँग बराबरीमा रोकिएको छ । स्लाभियाले घरेलु टोली बार्सिलोनालाई गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो ।
घरेलु मैदान नोउ क्याम्पमा पाहुना टोलीलाई दवावमा राखेपनि स्लाभियाको बलियो रक्षापङ्ति तोड्न नसक्दा बराबरीमा रोकिन पुग्यो । खेलको ११औं मिनेटमा जेरार्ड पिकेको प्रहार बाहिरिदा बार्सिलोना अग्रता लिनबाट चुकेको थियो ।
३५औं मिनेटमा आर्टुरो भिडालको पासमा कप्तान लियोनेल मेस्सीको प्रहार क्रसबारमा लागेर बाहिरिदा बार्सिलोना चुकचुकाएको थियो । ४३औं मिनेटमा भिडालको पासमा मेस्सीको प्रहार गोलरक्षक ओनरेज कोलारले सहजै बचाए । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा प्राहाले गोल गरेपनि गोलले मान्यता पाएन ।
७८औं मिनेटमा अन्सु फातीको पासमा मेस्सीको प्रयास गोलरक्षकले विफल पारिदिए । इन्ज्युरी समयमा अर्काे एउटा सुन्दर मौका पाएपनि सदुपयोग शुन नसक्दा बार्सिलोना गोलरहित बराबरीमा रोकियो ।
बराबरीसँगै बार्सिलोना समूह ‘एफ’ मा ४ खेलबाट ८ अंक जोडेर शीर्षस्थानमा यथावत छ । प्राहा २ अंक जोडेर पुछारमा छ ।